Version 0.2.9 – Ahụhụ fixes
July 21, 2009 site na rịọ Ahapụ a Comment
Ikpeazụ ụbọchị ole na ole e ji idozi ụfọdụ chinchi kọrọ site anyị ọrụ. Full Ebe e si nweta na-e nyere na mgbanwe log. Ga-amasị anyị na-ekele onye ọ bụla na akuko chinchi anyị n'ihi na ọ na-enyere anyị mma a software maka onye ọ bụla.
Anyị na-enwe na-akwado gị ma na-agbalị na-ahapụ dịghị nkume unturned na iji nyere gị aka, na-eche na kpọtụrụ anyị, ma ọ bụrụ na anyị na-adịghị zara n'ime a ezi uche oge – dị nnọọ kpọtụrụ anyị ọzọ!
Anyị na-jụrụ banyere onyinye (ugboro abụọ n'izu a). Ya mere mbụ – n'ebe a anyị anaghị anabata ego ọ bụla onyinye (ọ bụ ezie na anyị na-ekele gị n'obi) ma anyị na-eme na-anabata a ole na ole ndị ọzọ n'ụdị nke onyinye. Inye anyị oge site n'izite ahụhụ akụkọ (na ọbụna mma, patches 😉 ) , agbasa ihe ọmụma banyere nke a plugin site ede ihe na gị blọọgụ ma ọ bụ mmasị forums, votu n'ihi na a plugin na WordPress ngwa mgbakwunye ndekọ otú ndị mmadụ ga-eji ya na N'ikpeazụ – ị nwere ike inyere anyị aka site ịlele na-asụgharị saịtị a ka nne gị-n'asụsụ dị iche iche.
Anyị na-atụ ị ga-enweta nke a version dị ukwuu dị ka anyị na-eme 🙂
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: bugfix, onyinye, obere, tọhapụ, WordPress ngwa mgbakwunye
Changeset na Transposh-wordpress [77b28fe]: Wepụ manụ 3rd otu Ịma Ọkwa si anyị admin peeji nke, bara uru ... August 10, 2018
Changeset na Transposh-wordpress [6bbf7e2]: update translation files August 4, 2018
Changeset na Transposh-wordpress [f039333]: bugbugpot August 4, 2018
Changeset na Transposh-wordpress [0688c7e]: Language aha, bụghị koodu August 3, 2018
Changeset na Transposh-wordpress [7a04ae4]: Ekwe mwepụ nke nzacha na backend nchịkọta akụkọ August 3, 2018